Dlala Naughty Ngesondo Imidlalo Ye-Android Kwindlela Yakho Mobile Izixhobo
Kakhulu itshintshile kwi-gaming ihlabathi kwi-yokugqibela ezimbalwa decades. Gaming sele kamsinya, uye kwi niche genre, agciniwe kuba nerdy kwaye geek inkcubeko ukuba enye uninzi lucrative mainstream amashishini ehlabathini. Xa kuqaliswayo, kwabakho elula, pixelated umdlalo apho u-abadlali ingaba zama amadonga betha phantsi ibhola kwezinye omnye ke imbono usebenzisa ezisisiseko umlinganiselo. Ngokuhamba kwexesha, ukuba evolved kwi into massive kwaye ngoku wabelane ngesondo imidlalo Android, phakathi kwezinye izinto. Kunye njani ngokukhawuleza izinto zinako ukuqhubela phambili, sibe ukhangela kwi oqaqambileyo umphinda-phinde ngo ozayo kuthi, nkqu nangona ngoku amaphawu ingaba njengoko okulungileyo njengokuba kubhaliwe sixhobo.
Ngomhla wokuqala, konke kwaba malunga novelty. Akukho mntu ngenene wakwazi oko sino kwi-store phantsi umgca kwaye imidlalo yevidiyo baba ngenye indlela elula. Ekubeni nako ukudlala kwi computer waba umdla ngokwaneleyo ukuba, nkqu nokuba abo imidlalo izakuba laughed e namhlanje, baba ngabo bathanda ezininzi. Ngoko ke, iteknoloji waqala phambili e a eziquqa inyathelo nje. Kamsinya ngokwaneleyo, sino zonke iintlobo ezininzi ezonakeleyo ezahlukeneyo genres. Ukususela puzzles emidlalo imidlalo ukuba quanta RPGs kwaye platformers, ishishini waba booming., Enyanisweni, kwenye indawo enye indlela XXX isiqulatho zifunyenweyo yayo indlela kwi dibanisa kwaye yenziwe egqibeleleyo xuba fit kuba porn aficionados kwaye hardcore gamers ngokufanayo.
Enye into wakhokela komnye kwaye, ukususela abazinikeleyo gaming consoles kwaye PCs, imidlalo yevidiyo bafudukela kwi ezinye izixhobo. Ngesondo imidlalo Android utilize a ingcamango ke kamsinya gaining kwi-popularity njengoko abantu eqale ukuba ukhetha _ephathwayo:. Uyakwazi ukuba elizeleyo ukudlala amava kwi gadget ukuba i kstars ... yakho pocket. Njengoko omabonakude kwaye zezikhumbuzo lukhule ngakumbi enamandla, ngoko baye umgangatho amaphawu uyakwazi ukudlala kwi kwabo. Nowadays, ke nzima ukuya kuxelela i-PC lomdlalo ukusuka i-Android omnye, mainstream okanye omdala.
Amava Visuals Ngathi Akukho Ndawo Ongomnye
Kunye portable izixhobo chu ukuthathela phezu zabo ngakumbi anamandla kodwa clunkier laptops kwaye PC configurations, babo umgangatho iguqulelwe kwi kuvuka proportionately ukuba popularity. Thina anayithathela yafikelela incopho apho inani abantu kuba ngaphezulu anamandla Android phones kwe-personal iikhompyutha. Ngenxa ukuba, kuya kuza njengoko akukho surprise ukuba ngesondo imidlalo Android ingaba silithi wonke umntu ke ingqalelo zonke phezu kwehlabathi., Xa portable gadget uba nkqu vala ukuba siqwalaselwe amandla desktop ikhompyutha lo gama ngaxeshanye ekubeni a kakhulu encinane, ikhusi, njalo efuna ukuza kuthi ga ngoku abangaphantsi zokusebenza, ngu akukho brainer ukuba imidlalo izakusebenza buttery mpuluswa.
Hayi kuphela ukuba kodwa zezikhumbuzo kunye omabonakude zithe yokufumana kujike ngcono screens. Nowadays, baya msebenzi incredibly eliphezulu kwaye masi, kuba imibala eqaqambileyo, kwaye immense hlaziya umyinge, zonke apho iindleko substantially ngaphezulu kwi inyanga ka-sibe linani elikhulu ubungakanani. Ukuba ngokucacileyo ithetha ukuba enkulu isixa-mali ngesondo imidlalo Android uza jonga indlela ngcono kunokuba abo kwi-PC okanye i-console. Ezimbalwa ukuze kunye bale mihla 3D kwaye hentai-njenge visuals kwaye ufumane i-unforgettable adventure., Bonke abo zinokuphathwa amantshontsho kuwe anayithathela sele lusting kuba ngoku comfortably ukungena kwi-palm lesandla sakho kwaye bazimisele yiya phantsi imdaka kwaye nanini na xa ufuna.
Ukuba ukhe ubene ikhangela realism, ngoko uza kuba blast kunye 3D KDE. Kule mini kwaye ubudala, amagcisa unako ukwenza scenes kwaye abasebenzi ukuba akasoze abe wathi, ukususela real-ubomi okkt. Kwaye, xa oko iza porn, ufuna yonke into jonga njengoko ezilungileyo kangangoko kunokwenzeka. Seduce, khulula, kwaye fuck zabo brains ngaphandle ngeli lixa cum kuba amehlo enu kuphela. Ngokufanayo, abo sazi njani kinky hentai unako ukufumana uza uthando cartoon ujonge ngesondo imidlalo Android. Kunye amagcisa' imagination ndihamba wasendle, awunokwazi nkqu begin uqiqe ukuba zonke izinto ukuba unako kunokwenzeka.
Eyodwa Gameplay kunye Ngesondo Imidlalo Android
Kunye uphuhliso Android phones kwaye zezikhumbuzo weza iindlela ezintsha ezisebenza kwaye wonwabe kunye imidlalo yevidiyo. Touch-screens baba na ukuba ngokufanayo phambi ezi izixhobo ndihamba mainstream, kwaye ukuba inikezela wonke ezahlukeneyo indlela ulawulo iimpawu kwaye ezisebenza nge-bume. Nokuba nge-mere touching okanye elula swiping, izinto ungayenza ukuba abo lovely kwaye horny ladies kwi desktop yakho ingaba ngoku naughtier kunokuba ngonaphakade. Kuthabatha iingubo ngaphandle ngendlela elula, bathambe swoop okanye yiya iibhola nzulu nzima kwaye ngasekunene ngaphandle i-bat.
Kunjalo nje tapping ikhusi asiyiyo yonke kukho kuyo. Plenty ka-ngesondo imidlalo Android, kwaye zabo mainstream counterparts, kusenokuba idlalwe kunye conventional controllers ezifana joysticks, joypads, kwaye nkqu keyboards, kwaye iimpuku. Ukuba uthetha imiqulu into ke ukwenzeka kwezi naughty omdala amagama eencwadi. Kuxhomekeke genre yomdlalo nisolko ukudlala, ungakwazi kuqwalasela e a ngakumbi relaxed amava, apho ukhe ubene kuphela ngamanye amaxesha inputting umyalelo okanye ungakwazi kuba qho thrilling ride ukuzaliswa olukhawulezayo movements kwaye ngokukhawuleza-paced senzo.
Ukuthatha izinto chu, ungakwazi sizame omnye abaninzi dating kwaye ngesondo sims, visual novels, untimed puzzles, dress-up imidlalo, kwaye ngaphezulu. Ngokufanayo, kukho numerous RPG amaphawu apho ukhe ubene kufuneka kuba okulungileyo ucwangciso kwaye decent ulwazi umdlalo mechanics. Lawula yakho iimpawu kwaye utilize zabo izakhono kakuhle kwaye uza kuba ndihamba phantsi kwaye imdaka kunye zinokuphathwa amantshontsho akukho xesha., Kwesinye isandla, ukuba ukhe ubene ikhangela into eza ngenene uvavanyo lwakho reflexes ngexesha ekubeni uvelisa a boner ngexesha elinye, uzakufumana plenty ka-shooters, platformers, kwaye demanding adventure ngesondo imidlalo Android phandle phaya.
Xa ucinga ka-hardcore gaming, kufuneka ngoko nangoko qinisekisa a flashy nenamandla PC uqwalaselo nge triple hlola ucwangciso ukuze kuthatha phezulu isiqingatha igumbi. Kwaye, xa yiyo yonke imiqathango kunye nabafana, kuya ingenza ukudlala perverted imidlalo kancinci nzima. Emva zonke, ungafuna kuba abanye yangasese ngexesha enacting yakho obscure kwaye fetish fantasies kunye dashing 3D kwaye hentai amantshontsho. Ngesondo imidlalo Android, kwesinye isandla, ingaba idlalwe kwi-ncinci kakhulu omabonakude kwaye hayi makhulu kakhulu zezikhumbuzo. Uyakwazi ukuthatha abo naphi na kwaye kuba steamy gaming iseshoni nanini na xa uziva ngathi oko., Ngale ndlela, kulula ukuba abe njengoko naughty kangangoko kunokwenzeka yangasese.